» हल अफ फेमको उत्कृष्ट २५ मा कसले मार्ला बाजी ?
८ माघ २०७७, बिहीबार ११:२३
चन्द्र घलान, मकवानपुर, ८ माघ । अन्तराष्ट्रिय अनलाईन गायन प्रतियोगिता हल अफ फेम सिजन २ मा उत्कृष्ट ५० प्रतियोगीहरु उत्कृष्ट २५ का लागि भिडिरहेका छन् । एमएनटीभी अष्ट्रेलियाको आयोजनामा भइरहेको यो शोको प्रसारण हिमालय टेलिभिजनबाट हरेक शुक्रबार र शनिबार राति ८ बजे भईरहेको छ । शोका निर्णायकहरुमा वरिष्ठ गायक दीप श्रेष्ठ, कन्दरा व्याण्डका चर्चित गायक विवेक श्रेष्ठ र चर्चित गायिका रजिना रिमाल रहेकी छिन् । निर्णायकहरुले ३० पूर्णाङ्कमा दिएको अंक र प्रोडक्सन टिमले १० पूर्णाङ्कमा दिएको अंकका आधारमा उत्कृष्ट २५ प्रतियोगीहरु अघिल्लो राउण्डका लागि छानिनेछन् । हल अफ फेम सिजन २ का उत्कृष्ट ५० मध्ये गत साताको दुई एपिसोडमा १८ जना प्रतियोगीहरुले आफ्नो प्रस्तुति दिईसकेका छन् । ती १८ जना प्रतियोगीहरुमध्ये काठमाडौँ कलंकी निवासी निरज नगरकोटीले सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गरेका छन् । उनले तिनैजना निर्णायकहरुबाट ७–७ अंक गरी जम्मा २१ अंक प्राप्त गरेका थिए । हालसम्म प्राप्त अंकहरुका आधारमा निरज उत्कृष्ट २५ मा पुग्ने पक्का जस्तै देखिएको छ । त्यस्तै अन्य प्रतियोगीहरुले पनि लगभग समान अंकहरु पाएका छन् । १८ जना प्रतियोगीहरुमध्ये कसले कति अंक पाए ? आउनुहोस् चर्चा गरौँ । हेर्नुहोस् भिडियो सामग्री–
हल अफ फेम सिजन २ को उत्कृष्ट ५० मा पुगेका दिनेश सुबेदी स्याङ्जाको वालिङ ८ निवासी हुन् । उत्कृष्ट ५० को प्रस्तुतिका क्रममा उनको गीतको टाईमिङ नमिले र क्राईट एरिया अनुसार नगाएको भन्दै तिनै जना निर्णायकहरुले डिसक्वालिफाई गरेका थिए । हल अफ फेम सिजन २ को उत्कृष्ट ५० मा पुगेका निमा शेर्पा दार्जिलिङको मुङ्पु निवासी हुन् । उनले उत्कृष्ट ५० को प्रस्तुतिका क्रममा निर्णायक विवेकबाट ७.५ तथा दिप र रजिनाबाट ६–६ अंक गरी जम्मा १९.५ अंक प्राप्त गरेका थिए । हल अफ फेम सिजन २ को उत्कृष्ट ५० मा पुगेका निरज नगरकोटी काठमाडौँको कलंकी मन्दिर निवासी हुन् । उनले उत्कृष्ट ५० को प्रस्तुतिका क्रममा गायनसँगै राम्रो गितार बजाएकोमा प्रशंसा पाएका थिए । उनले तिनैजना निर्णायकहरुबाट ७–७ अंक गरी जम्मा २१ अंक प्राप्त गरेका थिए । हल अफ फेम सिजन २ को उत्कृष्ट ५० मा पुगेका अर्जुन लिम्बु भक्तपुरको सल्लाघारी निवासी हुन् । उनले उत्कृष्ट ५० को प्रस्तुतिका क्रममा निर्णायक दिपबाट ४ अंक तथा रजिना र विवेकबाट ५–५ अंक गरी जम्मा १४ अंक प्राप्त गरेका थिए । हल अफ फेम सिजन २ को उत्कृष्ट ५० मा पुगेका निशान्त कुमार विश्कर्मा हाल दोहा कतारमा छन् । उनले उत्कृष्ट ५० को प्रस्तुतिका क्रममा निर्णायक दिपबाट ५ अंक, रजिनाबाट ५.५ अंक र विवेकबाट ६ अंक गरी जम्मा १६.५ अंक प्राप्त गरेका थिए ।
हल अफ फेम सिजन २ को उत्कृष्ट ५० मा पुगेका विजय सुनार बुटवलको बर्दाघाट निवासी हुन् । उनले उत्कृष्ट ५० को प्रस्तुतिका क्रममा तिनै जना निर्णायकहरुबाट ६–६–६ अंक गरी जम्मा १८ अंक प्राप्त गरेका थिए । हल अफ फेम सिजन २ को उत्कृष्ट ५० मा पुगेकी बिमला श्रेष्ठ धादिङको निलकण्ठ निवासी हुन् । उत्कृष्ट ५० को प्रस्तुतिका क्रममा उनको टाईमिङ नमिलेको र शोको रुल अनुसार नभएकोले तिनै जना निर्णायकहरुले उनलाई डिसक्वालिफाई गरेका थिए । हल अफ फेम सिजन २ को उत्कृष्ट ५० मा पुगेका गिरिजा खतिवडा बिराटनगर निवासी हुन् । उत्कृष्ट ५० को प्रस्तुतिका क्रममा उनले निर्णायक विवेकबाट ६ अंक तथा निर्णायक दिप र रजिनाबाट ६.५–६.५ अंक गरी जम्मा १९ अंक प्राप्त गरेका थिए । हल अफ फेम सिजन २ को उत्कृष्ट ५० मा पुगेकी दिव्यदृष्टि क्षेत्री बानेश्वर, काठमाडौँ निवासी हुन् । उत्कृष्ट ५० को प्रस्तुतिका क्रममा उनले निर्णायक दिपबाट ५ अंक तथा निर्णायक विवेक र रजिनाबाट ५.५–५.५ अंक गरी जम्मा १६ अंक प्राप्त गरेकी थिईन् । हल अफ फेम सिजन २ को उत्कृष्ट ५० मा पुगेका सविन मोक्तान खानीखोला ७ काभ्रेपलाञ्चोक निवासी हुन् । उत्कृष्ट ५० को प्रस्तुतिका क्रममा उनले निर्णायक दिपबाट ५ अंक तथा निर्णायक विवेक र रजिनाबाट ५.५–५.५ अंक गरी जम्मा १६ अंक प्राप्त गरेका थिए ।
हल अफ फेम सिजन २ को उत्कृष्ट ५० मा पुगेका अभिषेक बानिया बसुन्धारा काठमाडौँ निवासी हुन् । उत्कृष्ट ५० को प्रस्तुतिका क्रममा उनको गायनको टाईमिङ नमिलेपछि प्रतियोगिताको नियम अनुसार डिसक्वालिफाई गरिएको थियो । हल अफ फेम सिजन २ को उत्कृष्ट ५० मा पुगेकी अपेक्षा श्रेष्ठ चितवनको ज्योतिनगर निवासी हुन् । उत्कृष्ट ५० को प्रस्तुतिका क्रममा उनले लिपसिङ गरेको आशंका भएपछि निर्णायकहरुले उनलाई अंक नदिई स्टाण्डबाई राखेका थिए । उनको बारेमा पछि निर्णय गरिनेछ । हल अफ फेम सिजन २ को उत्कृष्ट ५० मा पुगेका विदेश सिग्देल विर्तामोड, झापा निवासी हुन् । सानै उमेरमा तहल्का मच्चाउने प्रस्तुति दिएका उनलाई निर्णायकहरुले प्रशंसा गरेका थिए । उत्कृष्ट ५० को प्रस्तुतिका क्रममा उनले तिनै जना निर्णायकबाट ५–५–५ अंक गरी जम्मा १५ अंक प्राप्त गरेका थिए । हल अफ फेम सिजन २ को उत्कृष्ट ५० मा पुगेका विनोद कार्की कन्काई ११ झापा निवासी हुन् । उत्कृष्ट ५० को प्रस्तुतिका क्रममा उनको क्राईट एरिया मिट नभएको कारण उनलाई डिसक्वालिफाई गरिएको थियो ।
हल अफ फेम सिजन २ को उत्कृष्ट ५० मा पुगेका नितेश बस्याल रुपन्देहीको कोटिवाहा निवासी हुन् । उत्कृष्ट ५० को प्रस्तुतिका क्रममा उनले निर्णायक दिपबाट ७ अंक, निर्णायक विवेकबाट ५.५ अंक र रजिनाबाट ६.५ अंक गरी जम्मा १९ अंक प्राप्त गरेका थिए । हल अफ फेम सिजन २ को उत्कृष्ट ५० मा पुगेका रुपेश पोख्रेल झापाको काकरभिट्टा निवासी हुन् । उत्कृष्ट ५० को प्रस्तुतिका क्रममा उनले निर्णायक दिप र रजिनबाट ६.५–६.५ तथा निर्णायक विवेकबाट ७ अंक गरी जम्मा २० अंक प्राप्त गरेका थिए । हल अफ फेम सिजन २ को उत्कृष्ट ५० मा पुगेका सागर अधिकारी पुरिनचौर १९ पोखरा निवासी हुन् । उत्कृष्ट ५० को प्रस्तुतिका क्रममा उनले निर्णायक दिपबाट ५ अंक तथा निर्णायक विवेक र रजिनाबाट ५.५–५.५ अंक गरी जम्मा १६ अंक प्राप्त गरेका थिए । हल अफ फेम सिजन २ को उत्कृष्ट ५० मा पुगेकी सञ्जीवनी महर्जन काठमाडौँको कपन निवासी हुन् । उत्कृष्ट ५० को प्रस्तुतिका क्रममा उनले निर्णायक दिप र विवेकबाट ६–६ अंक तथा निर्णायक रजिनाबाट ६.५ अंक गरी जम्मा १८.५ अंक प्राप्त गरेकी थिईन् ।